Friday January 17, 2020 - 23:29:35 in Wararka by Mustaf Xuseen
Waxaa sii kordhaya qasaaraha kaso gaaray maleeshiyaadka argagixisada Al-shabaab dagaalkii degaanka Xaaji Cali ee gobolka Shabeelaha dhexe. Maleeshiyaadka argagixisada Al-shabaab waxaa dagaalkaasi Ciidanka Xoogga Dalka ay kaga dileen horjoogihii Ja
Waxaa sii kordhaya qasaaraha kaso gaaray maleeshiyaadka argagixisada Al-shabaab dagaalkii degaanka Xaaji Cali ee gobolka Shabeelaha dhexe. Maleeshiyaadka argagixisada Al-shabaab waxaa dagaalkaasi Ciidanka Xoogga Dalka ay kaga dileen horjoogihii Jabhadaha gobolada Shabeelaha dhexe iyo Hiiraan Cabdiqani Maxamed Muse Jobaan iyo abaanduulihiisii sidookal waxeey Ciidanka Xoogga dagaalka kudileen Sadax Taliye Koox .
Waxaa weli sii kordhaya qasaaraha gaaray maleshiyaadka dhimashada ayaa haatan waxeey kor usii dhaafeeysaa 25 halka dhaawuna kor usii dhaafayo 40 maleeshiyaad ah sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka.
Dagaalkii kadhacay degaanka Xaaji Cali ee degmada Cadale Gobolka Shabeelaha dhexe ayaa maleeshiyaadka argagixisada Al-shabaab waxaa kasoo jabxoogan oo ay kala kulmeen Ciidanka Xoogga Dalka oo udiyaarsanaa dhagarta cadawga Ummadda Soomaaliyeed.